“Heshiiska Barcelona waa xalka ugu fiican ee qof walba” – Aabaha dhalay Neymar Jr – Gool FM
(Paris) 13 Dis 2019. Aabaha dhalay ciyaaryahanka reer Brazil iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr ayaa markale albaabka u furay inuu heshiis la gaaro naadiga reer Spain ee Barcelona.
Sida laga soo xigtay wargeyska “El Mundo” ee dalka Spain Neymar Jr ayaa dacwad ka gudbiyay kooxdiisii ​​hore ee Barcelona, ​​wuxuuna weydiistay lacag dhan 3.5 milyan oo doollar, halkaasoo uu xiddiga u arko in kooxda reer Catalonia ay ula dhaqantay si caqiido xumo ah, wuxuuna iska diiday inuu u dhaafo qeyb ka mid ah mushaarkiisa sababa la xiriira inuu u dhaqaaqay kooxda Paris Saint-Germain.
Yeelkeede, Aabaha dhalay Neymar Jr ayaa tilmaamay kaddib wareysi uu ku bixiyay idaacada “Cadena SER” ee dalka Spain in ugu dambeyntii uu jiri doono xal saaxiibtinimo ee dhex mari doona ciyaaryahanka iyo kooxda Barcelona.
“Ma xasuusto cabashadan, waa dhacdo hore ee la xiriirta tan iyo bixitaanka Neymar Jr, wax walbana ee u dhexeeya ciyaaryahanka iyo kooxda Barcelona waxaa lagu xalin doonaa si saaxiibtinimo leh”.
“Goor dhow ama goor dambe waxaa dhici doono heshiis saaxiibtinimo ee ku dhex mara anaga iyo Barcelona dhanka garsoorka”.
“Waxaan dooneynaa inaan heshiis la galno Barcelona taasna waa xalka ugu fiican ee dhinac kasta”.
Intaas kaddib Aabaha dhalay Neymar Jr ayaa la weydiiyay su’aal ah haddii uu wiilkiisa ku soo laabanayo Barcelona si markale uu kaga garab ciyaaro Messi, wuxuuna isagoo dhoolo cadeenaya ku jawaabay.
“Hagaag, wuxuu heshiis kula jiraa kooxda Paris Saint-Germain, garan mayno inuu soo laaban karo iyo haddii kaleba, balse ma xumeyn xiriirka uu la lahaa madaxweynaha Barcelona ee Josep Maria Bartomeu”.